🥇 ▷ Adeegyada Google Play ma baterigaaga daadisaa? Tani waa xalka ✅
Adeegyada Google Play ma baterigaaga daadisaa? Tani waa xalka
Miyaa mobiilkaagu dhawaanta u muuqdaa inuu sii cimri dheeraanayo nolosha batteriga Waxay noqon kartaa qaladka nooca ugu dambeeya ee Adeegyada Google, codsi kaas oo nidaamyada kale ee daruuriga u ah sida kaydinta dalabka ay kuxiran tahay Google Play Store. Dukaanka Google Play Waa dalabkaas, sida aad ogtahay, meesha aad ka heli karto wax walba oo aad ugu baahan tahay inaad mobilkaaga uga dhigto midka ugu waxtarka badan aaladahaaga. Gaar ahaan, waa nooca 18.3.82 ee Adeegyada Google Play. Samee hal shay: hubso inaad haysatid noocaan si aad u xaqiijiso in kani yahay dhibaatada batarigaaga batari. Haddii aad heysato nooc kale, waa inaad raacdaa talooyin kale oo faa’iido leh si aad u keydiso batteriga.
Isdiiwaangalso si aad u hesho wararka teknolojiyadda ugu dambeeyay ee sanduuqaaga boostada. Waxaan kuu soo diri doonaa hal emayl hal maalin ah oo ay ku jiraan soo koobitaanka cinwaannada wararka, khiyaanooyinka, isbarbardhiga, dib u eegista lagu daabacay mareegtadayada.
Adeeg waxaa bixiya Mailchimp
Gali goobta taleefanka gacantu. Qaybta barnaamijyada nidaamka, waxaad raadin doontaa u dhigmayaasha Adeegyada Google. Gudaha, waxaad ka heli kartaa nooca aad rakibtay. Haddii ay tahay 18.3.82, ka akhriso sababta oo ah waxaan ku siinaynaa xalka si uusan batterigu si dhakhso ah u dhammaan.
Xalka ugu fiican ayaa ah kan, xilligan xaadirka ah, uusan jirin, oo ay tahay in Google uu ku hagaajiyo cusboonaysiinta. Hada, tani waa waxaan sameyn karnaa xallinta dhibaatada.
Gali bogga kuu oggolaanaya inaad marin u hesho kooxda beta ee dalabka.
Kooxdaan waxaad ka heli kartaa nooc tijaab ah oo ah Adeegyada Google oo aan lahayn khaladdan. Kaliya waa inaad guji bogga kujira sanduuqa u dhigma oo aad noqotaa Beta-Tester. Markaad qayb ka noqoto bulshada Google Adeegyada beta, gal Google Play Store oo fiiri qaybta meesha ku taal cusbooneysiinta Waa inaad heysataa cusboonaysiin codsi kaas oo xallin doona dhibaatada ka bixidda bateriga.
Waqtigan xaadirka ah, waa xalka kaliya ee suurtagal ee dhibaatadan. Waa inaad ogaataa in, inaad xubin ka tahay kooxda ‘Beta’ ee tan iyo codsiyada kale, waxaad heli doontaa a nooca gaarka ah oo leh adeeg aan wali qof walba u heli karin, nooca aan laga yaabo inuu aad u khafiifin oo ay ku jiraan khaladaad kale. Si kastaba ha noqotee, haddii dhibaatada tuubadaada si aad ah loogu dhawaaqo, waxba kuma lumi doontid adigoo isku deyaya.
Warar kale oo ku saabsan… Google
Sida barnaamijyadaada iyo fiidiyowgaaga loogu diyaariyo barta Instagram
Free Chatous, app si aad ula sheekaysato dadka aan tooska ahayn ee ku jira barnaamijkaaga Android
Tabaha khiyaameynta Google: Khubaro ku noqo talooyinkaan iyo tabaha qarsoon – Liiska 2019
WhatsApp ma tirtireyso faylasha loo diray iPhone haddii aan riixno “Delete for all”
Waxaan ku tijaabinay Disney + Android: kani waa adeegga qulqulka Disney & # 039; s
ProCam 2, si loogu sameeyo oo loo habeeyo sawirrada ama fiidyowyada iPhone, BILAASH waqti xadidan